Iingcamango zenkululeko kunye nezisombululo ezingaqhelekanga, ngokuqinisekileyo, zibalulekile kwilungiselelo lezindlu. Kodwa abayili bezilumkiso bayalumkisa: phakathi kwe-avant-garde eclecticism kunye ne-banal durnovkusiyem kukho umgca obulalayo emva kokuba ubume befashini buba yintshutshiso engenanto. Sinokulinganisa njani ngokufanelekileyo kwimida?
Khetha ifenisha yanamhlanje. "Iindonga" ezinkulu, amabalabhaka amancinci, amaqhosha amakhulu kunye neerzzanines kunye neebhodi zangasese ayikho enye indlela ekhethekileyo yokukhetha indlu, nokuba ngaba ngumbuzo wokwenza umzobo we-Soviet yangaphakathi. Kufuneka ugxininise kwimimiselo ekhoyo-ukuqhuba, ukusebenza, ukunyakaza. Iinkqubo zeModular, iikhabhinethi zenguqu, izakhiwo ezisuka kwiityuli ezivulekileyo kwaye zivaliweyo azigcini nje kwaye zilula - zivumela ukuba uhlele indawo ngokuhambelana neemfuno ngamnye.
Nika ifenitshala yeofisi. Indawo yokusebenza efulethini ayiyonto, kodwa imfuno esiphuthumayo yomyinge ohlala kwi-metropolis. Kodwa akudingeki ukuba idalwe ngokwee-canons ze-ofisi-loo ngundoqo iya kuhlala ikhangelekile engaphandle kwindawo yokuhlala. Izitulo eziqhelekileyo kumavili kunye neetafile ezivela kumacwecwe e-DSP amancinci alungele ukutshintshela imizekelo eninzi yelayon kunye nechanekileyo.
Gwema ukulawulwa kwesimbo esinye. Kule meko ukuba kufanelekile ukuba usuke kwisikhokelo esicacileyo, ukuvumela ukuba ucingisise. Ungazami ukuthenga yonke ifenitshala ukusuka kwisethi enye okanye zonke izinto zokuhlobisa - ukusuka kwinqaku elithile. Kuyinto engokwemvelo ukuzisa izandi eziqhayisekileyo okanye ukuchukumisa okungavamile kwindawo yangaphakathi - kuphela oko kuya kuba yinto efanelekileyo.
Umbala we-Orange ngaphakathi
Isivuno sesitayela ngaphakathi
Akukho mali eyaneleyo yokwenza ukulungiswa ngokupheleleyo
Kwiphephethi - ngezindiza ezidlulileyo
Yenza intwasahlobo yangaphakathi
Amakhethini amahle kakhulu kweli xesha
I-tomato sauce ne tarragon
Ukusetyenziswa kokusetyenziswa kwe-hydrogen peroxide ebusweni
Ibali likaBrad Pitt no-Angelina Jolie
I-Spanish Hot Flamenco Inkqubo yokuDanisa - kunye neentlobo zokusebenza
Isaladi "Imiphumo yefestile"
Ulawulo, ukondla usana
I-Tomato yaseJapan yaseOmelette
Isaladi yaseThailand yamakhabethe
Ubuhlungu emadolweni, izilwanyana zabantu